ငွေဆယ်သိန်းနဲ့ လာကန်တော့တဲ့ ရဲနောင်ကို နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုးမီ – Askstyle
ငွေဆယ်သိန်းနဲ့ လာကန်တော့တဲ့ ရဲနောင်ကို နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုးမီ
အဆိုေတာ္ ပိုးမီဟာဆိုရင္ Myanmar Idol Season2မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း သူမရဲ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ အသံခ်ိဳေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ့ စိတ္ဝင္စားအားေပးခ်စ္ခင္မွုကို လက္ခံရရွိထားခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပိုးမီနဲ႔ Myanmar Idol Season2မွာ အတူတူပါဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲေနာင္ကလည္း ပိုးမီနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေႏြးေထြးၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဂ႐ုစိုက္တဲ့ ပိုးမီနဲ႔ ရဲေနာင္တို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကို ပရိသတ္ေတြကလည္း သေဘာက်ၾကပါတယ္။
ပိုးမီနဲ႔ ရဲေနာင္တို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ဒီႏွစ္ Myanmar Idol Season4မွာ Winner ဟာ မိန္းကေလးျဖစ္မလား ေယာက်ာ္းေလးျဖစ္မလားဆိုၿပီး ေငြဆယ္သိန္းနဲ႔ ေလာင္းေၾကးစားေၾကး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမွာ Winner က မိန္းကေလးျဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲေနာင္က ပိုးမီကို ေငြဆယ္သိန္းနဲ႔ ပိုးမီရဲ႕အိမ္ထိ သြားေရာက္ အရံႈးေပးခဲ့ရပါတယ္။
Lပိုးမီက “စိတ္ေတာင္ မေကာင္းဘူးးး ေမာင္ရဲႏူေလးရယ္. ခုလို ဆယ္သိန္းနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လာကန္ေတာ့တဲ့အတြက္ ႏွစ္သစ္မွာ ခုထက္ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္တိုးတက္ပါေစ ခ္ခ္.နာက္ႏွစ္ season5မွာ ထပ္ေလာင္းၾကမယ္ ဟီးးဟီးးး” ဆိုၿပီး စေနာက္ထားပါတယ္။ ပိုးမီကေတာ့ ရဲေနာင္ကို အႏိုင္ရၿပီး ေလတိုက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ပိုးမီနဲ႔ ရဲေနာင္တို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ကို သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
Source: Poe Mi’s fb,CRD-Rowena
အဆိုတော် ပိုးမီဟာဆိုရင် Myanmar Idol Season2မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင်း သူမရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံချိုလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားအားပေးချစ်ခင်မှုကို လက်ခံရရှိထားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမီနဲ့ Myanmar Idol Season2မှာ အတူတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရဲနောင်ကလည်း ပိုးမီနဲ့ တော်တော်လေး ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နွေးထွေးပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဂရုစိုက်တဲ့ ပိုးမီနဲ့ ရဲနောင်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေကလည်း သဘောကျကြပါတယ်။
ပိုးမီနဲ့ ရဲနောင်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ဒီနှစ် Myanmar Idol Season4မှာ Winner ဟာ မိန်းကလေးဖြစ်မလား ယောကျာ်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီး ငွေဆယ်သိန်းနဲ့ လောင်းကြေးစားကြေး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ Winner က မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် ရဲနောင်က ပိုးမီကို ငွေဆယ်သိန်းနဲ့ ပိုးမီရဲ့အိမ်ထိ သွားရောက် အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။
Lပိုးမီက “စိတ်တောင် မကောင်းဘူးးး မောင်ရဲနူလေးရယ်. ခုလို ဆယ်သိန်းနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက်လာကန်တော့တဲ့အတွက် နှစ်သစ်မှာ ခုထက်ပိုပြီး အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ ခ်ခ်.နာက်နှစ် season5မှာ ထပ်လောင်းကြမယ် ဟီးးဟီးးး” ဆိုပြီး စနောက်ထားပါတယ်။ ပိုးမီကတော့ ရဲနောင်ကို အနိုင်ရပြီး လေတိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုးမီနဲ့ ရဲနောင်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အဖြစ်ကို သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။